Ndezvipi zvemashoko ezvehuwandu zvinoita kuti ndiwane mamwe webhusaiti yepamutemo
Nhasi, ndichakuudza pamusoro penzira dzakanakisisa dzinogona kuwedzera webhusaiti yehupenyu kuburikidza nehuwandu hwemagariro evanhu. Ramba uchiverenga kuti uwane nzira dzakakisisa dzekuvandudza iwe webhusaiti yekutengesa.
Tsvaga mazano ekukwevera mamwe magwagwa pawebsite yako:
Kubatanidzwa mumakwikwi, mapoka, uye munharaunda
Mapoka evhidhiyo nemagariro akakwana pakuwedzera webhusaiti yako. Mukuwedzera pakupa mukana wekubatana nevatengi vako uye mamwe marongerwo emabhizimisi akafanana, anokubatsira iwe kuvaka hukama hwebhizimisi hwakasimba.
Nokutora nhaurirano dze Twitter uye nhepfenyuro yehupfumi pane Facebook ne LinkedIn, unowedzera mararamiro ako nekuziva. Kutsvaga mharaunda mumashandi ako zviri nyore kupfuura iwe unogona kufunga. Chinhu chimwe chete chaunofanira kuita ndechokubatana newetaneti uye uone kuti mapoka mavari anodikanwa ari chikamu chei. Kana ukangotanga dunhu rako, edza kubatana nhengo dzaro pane imwe nguva. Tarisa pakupa kukosha. Zvinyorwa zvinogadziriswa uye kukurukurirana zvinonzwisisika zvichanyengera vateereri kuti vadzidze zvakawanda pamusoro pebasa renyu.
Kusanganisira mapikicha emifananidzo uye zvigadzirwa mumagariro ako ezvehupfumi
Zvakave zvichiratidzwa kuti vanhu vanoita dhidhiyo yekuona zviri nani kudarika chero ipi zvayo yemhando.
Kuti zvive zvakanyatsojeka, maitiro edu ehutano ehutachiona makumi matanhatu zvakapetwa kazhinji kupfuura zvinyorwa.
Nokuti kutarisa kwatinoita kunongopfupisa, masangano evanhu anopa zvakanyanya kunzvimbo dzezvinyorwa nemifananidzo inobata.
Zvisinei, izvi hazvirevi kuti unofanira kugara uchiwedzera mifananidzo kune zvinyorwa. Muchiitiko apo mifananidzo haina kuwedzera chero kukosha kumashoko ako, zviri nani kusiya mushonga pasina chithunzi. Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti zvimwe webhusaiti yepawebsite inogona kuwanikwa chete kana iwe uchidhinda mapikicha aya ane chokuita nehurukuro.
Kuwedzera makambani ekubata hashtag kumasangano enyu ezvepabonde
Hashtags inonyanya kukosha pane Twitter ne Instagram. Semalt nyanzvi dzinoshandisa kushandisa 2-3 mahedheni ane ruzivo uye akasiyana mune imwe tweet pa Twitter. Usati washandisa chero hashtag, tora nguva yako kuti uwane kuti chii chinyorwa chiri kuwedzera iyo hashtag, saka unodzivisa chero mamiriro ezvinhu akaoma. Kana zvasvika kune Instagram posts, pane imwe post iwe unogona kushandisa kusvika makumi matatu hahtags. Dzivisa kushandisa hashtag dzinonyanya kufanana ne #cute kana #amazing, uye mutsetse unoenderera mberi - haawedzere kukosha kwebhizimisi rako.
Kubatanidza kugoverana kwevanhu muchikwata chako
zvimwe zviito zvinotora kuti nzvimbo dzevashanyi dzigovana zvaunenge uine nehutano hwavo. Nekutsvaga nekukurumidza, vhidhiyo mabhizinesi mabhii anowanzoita web page link uye musoro wepa blog kana chinyorwa kuitira kuti vashanyi vanogona kuigadzirisa pakarepo uye kuparidzira.
Usamborega kuedza. Pane nguva dzose mazano matsva ekutengesa Source . Ndezvipi zvemagariro evanhu iwe uri kuisa muchiito kuti uwane mamwe webhusaiti yepaiti? Titiudze pamusoro payo mune chikamu chekuudza - tinoda kunzwa kubva kwauri!